हरेक दिन कपाल नुहाउने गर्नुभएको छ ? यी गल्ती नगर्नुहोस्, नत्र पछुताउनु पर्ला – Khabaarpati
November 29, 2020 November 29, 2020 Khabar PatiLeaveaComment on हरेक दिन कपाल नुहाउने गर्नुभएको छ ? यी गल्ती नगर्नुहोस्, नत्र पछुताउनु पर्ला
वेस शार्पटनका अनुसार प्राय मानिसमा कपाल झर्ने, रुखो हुने तथा कपालको चमक हराउने समस्या आउने गर्दछ। त्यसै मानिसले विभिन्न किसिमका क्रिम लगाएर बपाललाई मुलायम बनाउने तथा मेसिनबाट तताउने गर्नाले पनि कपालमा समस्या हुने गर्दछ।यस्ता व्यक्तिले कपाललाई धेरै कसेर बाँध्नबाट बच्नु पर्दछ। किनकी यसले पनि कपाललाई हानी पुर्याउने गर्दछ। जुन स्याम्पुमा डिटर्जेन्टको मात्रा बढी हुने गर्दछ, त्यसको प्रयोग पनि हानिकारक हुने गर्दछ।
वेट शार्पटनका अनुसार हरेक दिन कपाल नुहाउने व्यक्तिले स्याम्पुको प्रयोग कम गर्नु पर्दछ। जबकी कहिलेकाही सधै कपाल नुहाउने व्यक्तिलाई पनि धेरै स्याम्पुको प्रयोग आवश्यक हुने गर्दछ।किनकी यसलाई धेरै स्याम्पु नलगाउँदासम्म कपाल सफा हुँदैन्। त्यसैले यस्तो अवस्थामा एकै पटक धेरै स्याम्पु नलगाउनुहोस् कपाललाई हानी पुग्ने गर्दछ।,,,भिडियो हेर्त्न तल क्लिक गर्नुहोला,,,
झुक्किएर पनि कसैलाई नसुनाऊनुहाेस्, तपाइले देख्नु भएको यी ५ सपनाहरु?